06/01/2011 - 07/01/2011 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ယနေထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ ကြေငြာချက်အပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
Today NLD Statement
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်​အေး​ချမ်း​မှု ကင်း​မဲ့​
Published on June 29, 2011 by ဒီဗွီဘီ · No Comments
ကချင်ပြည်နယ် မြို့​တော် မြစ်ကြီး​နား​မြို့​မှာ ညမထွက်ရ အမိန့်​မထုတ်ထား​သော်လည်း​ ​ဒေသခံလူထုတို့​မှာ ည​ရေး​ညတာ အပြင်ထွက်ဖို့​ ခက်​နေပြီး​ ညစဉ်ဖမ်း​ဆီး​မှု​တွေလည်း​ရှိ​နေလို့​ ​ဒေသခံလူထုတို့​မှာ စိုး​ရိမ်ထိတ်လန့်​ ​နေကြပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နယ်သို့ ခရီးထွက်ရန် တလပင် မလိုတော့ချိန်၌ အစိုးရက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် တရားဝင် ရပ်တည်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသိပေးမှု
FILE - In this Nov. 13, 2010 file photo, Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi talks to the supporters as she stands at the gate of her home in Yangon, Myanmar. Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi on Tuesday, June 28, 2011 delivered the BBC's annual Reith Lecture, speaking to an international radio audience via recordings smuggled out of the country. (AP Photo/Khin Maung Win, File)
LONDON—Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has deliveredaprestigious annual BBC radio lecture, telling an international audience that her compatriots are envious of people in Tunisia and Egypt, where long-serving dictators have been toppled. On recordings smuggled out of Myanmar, also known as
ရန်ကုန်တိုင်း၊ သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာ သုံးဆယ်ကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ နီးစပ်သူတွေကိုချည်း ခန့်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုး​ရကို ပံ့​ပိုး​နေသည့်​ ပုဂ္ဂိုလ် ၄၀ ​ကျော်ကို အ​ရေး​ယူဒဏ်ခတ်ရန် ကြိုး​ပမ်း​
Published on June 28, 2011 by ဒီဗွီဘီ · No Comments
မြန်မာအစိုး ​ရကို စီး​ပွား​ရေး​နဲ့​နိုင်ငံ​ရေး​အရ ​ကျော​ထောက်​နောက်ခံပြု​နေတဲ့​ အ​ပေါင်း​အ​ဖော် ၄၂ ဦး​ ကို ဘဏ္ဍာ​ရေး​အရ ပစ်မှတ်ထား​ ဒဏ်ခတ်အ​ရေး​ယူဖို့​ဝါရှင် တန်အ​ခြေစိုက် မြန်မာ့​အ​ရေး​လှုပ်ရှား​မှုအဖွဲ့​USCB က အ​မေရိကန် ဘဏ္ဍာ​ရေး​ဝန်ကြီး​ တီမိုသီဂိုက်သနာ
YANGON — Hollywood star Michelle Yeoh, who plays pro-democracy champion Aung San Suu Kyi in an upcoming film, has been deported by army-dominated Myanmar and blacklisted, an official said Tuesday.
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ကမ္ဘာကျော် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မီရှဲလ်ယိုးကို အာဏာပိုင်များက နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်း၍ ပြည်ဝင်ခွင့် ငြင်းပယ် လိုက်သည့်အတွက် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ လှည့်ပြန်သွားရကြောင်း
ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေ ဦးစီးပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပတဲ့ PX3 နိုင်ငံတကာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ ဒီနှစ်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေ ဦးစီးပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပသော PX3 နိုင်ငံတကာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ရရှိခဲ့သည့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်၌ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ကာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၌ အဆင့်မြင့်ပညာ ပထမနှစ် စတင်တက်ရောက်ကြရမည့် သူများအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သို့ ရွေးချယ်
တက်ရောက်မည်ဆိုပါက စာသင်နှစ် လေးနှစ် တက်ရောက်မှသာ ဘွဲ့ရရှိတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း
ရွှေဂတ်စ်စီမံကိန်းမှ အလုပ်သမားများ စွန့်ထုတ်ပစ်သော မစင် မိလ္လာများကို ကျေးရွာအနီးချောင်းတွင် ကားဖြင့် လာသွန်နေသဖြင့် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အုန်းတော အုပ်စု ၀က်ဆံ ကျေးရွာမှ ကျေးရွာ လူကြီး ၆၅ ဦးက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ထံ စာရေးတိုင်ကြားလိုက်ကြောင်း
ဒီကနေ့ မှာတော့ နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်လာတဲ့ ယူတီကာမြို့က KYU
အသင်းနဲ့ OTC အသင်း ယှဉ်ပြိုင် ကစားရာမှာ KYU အသင်းက အနိုင် ကစားပြီး ဒိုင်းဆု
ရယူသွားပါတယ်။ အခုလို ဘောလုံးပွဲတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံ
သားများအသင်းက စီစဉ် ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ် ဘောလုံးပွဲ ကိုတော့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့(အော်ဘာနီမြို့) ရဲ့ ပံပိုး ကူညီ
ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့ရှိ KIO ကချင်
နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: RFA)
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ အကြား တင်းမာမှု မရှိတော့ဘဲ အခြေအနေတွေ နဂိုအနေအထား နီးပါး တည်ငြိမ်မှု ရရှိနေပြီဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းရဲ့ ပြောဆိုချက် မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း KIO က ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့ရှိ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဌာနချုပ် သင်တန်းကျောင်းတွင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ သူရဦးရွှေမန်းဟာ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့
ယခုလ ၁၈ ရက် ည ၉ နာရီခန့်က သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူစယ်မြို့ရှိ အရာရှိတည်းခိုရိပ်သာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲအပြီး မူစယ် ခရိုင် အတွင်း ရှိကချင်ကျေးရွာ နှင့်ရပ်ကွက်များ ဧည့်စာရင်းစစ်ဆေးမှု ပိုလုပ်လာ ကြောင်း သိရသည်။ ဒေသခံအာဏာပိုင်များက
TOKYO - JAPAN will sendasenior diplomat to Myanmar next week to meet pro-democracy leader Aung San Suu Kyi and hold talks with the government, the foreign ministry in Tokyo said on Friday.
Secretary toaMember of the House of Representatives
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက အဆင့်မြင့် သံတမန်တဦး ရှေ့သီတင်းပတ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Residents said two people were wounded inablast which hitavehicle in Mandalay [Reuters] Near simultaneous bomb explosions in three Myanmar cities have wounded at least two people, the government and residents say. The first explosion destroyedacar and shattered windows near the main Zaygyo market in
SYDNEY, June 24, 2011 (AFP) - - Australian Foreign Minister Kevin Rudd will visit Myanmar next week and meet democracy icon Aung San Suu Kyi,astatement said Friday, in the first such visit in nine years to the military-dominated country. Rudd will also meet with members of the government at what he said wasa"critical juncture in Burma's
According to Mizzima news, three powerful bombs exploded within minutes of each other in the cities of Mandalay, Naypyitaw, and Maymyo. A few hours later,asecond bomb explosion hit Mandalay.
by May Thingyan Hein on Thursday, June 23, 2011 at 5:08am တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး
နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်တိုင်း ကျွန်မမှာ တူညီတဲ့ မေခွန်းတစ်ခုကို အမြဲ မေးလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ `တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက် ဘယ်လို ရည်မှန်းချက်မျိုး ရှိပါသလဲ`ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြေတဲ့အဖြေနဲ့
ရန်ပိုင် Thursday, 23 June 2011 18:45
အစိုးရထံမှ တရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက် ရရှိမှသာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးမည်ဟု ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) က ပြောသည်။
KIA အနေဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးတွင် အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသာ
ယခုတစ်ပတ် လတ်တလော စိတ်ကြိုက်ဖက်ရှင် ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပေးမည့်သူက အချိန်တိုအတွင်း အကယ်ဒမီ ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးလျက်ရှိသူ သရုပ်ဆောင်
EU အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး
ရန်ကုန်မြို့မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ EU ဥရောပ သမဂ္ဂ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ဒီနေ့ ညနေ ၆ နာရီမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ အဲဒီနောက်မှာ
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ အခမ်းအနား ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပ
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ (World Refugee Day) အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ (World Refugee Day) သည် ဇွန်လ ၂၀ ရက် နေ့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အဆိုပါ နေ့၌ ဒုက္ခသည်များနှင့်
ရန်ပိုင် Wednesday, 22 June 2011 12:27
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အစိုးရစစ်တပ်များအကြားရှိ နယ်စပ်တိုက်ပွဲများ လျော့နည်းသွားသော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တွင် ဗုံးများ ဖောက်ခွဲခြင်းဖြင့် KIA က မြို့ပြတိုက်ပွဲအဖြစ် ပြန်လည်စတင်လိုက်ကြောင်း
Weekly Eleven News Journal Vol(6) No(38)
by Straw Hat Ricky on Monday, June 20, 2011 at 4:22am
စင်ကာပူဟာ 2008 စီးပွားပျက်ကပ်မှာ အလုပ်အကိုင် အပြိုင်အဆိုင်ဆုံးရှုံးကြအပြီး နိုင်ငံခြားသား ကော်လာဖြူ ကော်လာပြာ အလုပ်သမားတွေအပေါ အမြင် စစောင်းလာကြတာဟာဖြင့် မေ (၇) ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာကိုလက်ထဲမြဲမြဲကိုင်ထားခဲ့
ယနေ့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ပြောကြားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့မိန့်ခွန်း (ရုပ်သံ)
မွေးနေ့ ရှင်အမေစုစကား�... [HQ]
ဘယ်ဘာသာပဲ ကိုးကွယ် - ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် - ဘာစကားပဲပြောပြော တကယ့်ကို စေတနာအပြည့်နဲ့တောင်းပေးတဲ့ ဆု ဟာ အတိုင်းအတာ တခုထိ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျမ ယုံပါတယ်.. ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျမက မေတ္တာ စေတနာရဲ့စွမ်းပကားကို အင်မတန် ယုံလို့ ပါပဲ ..
အရင်နှစ်တွေမှာဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေ အခုနှစ် ဆုတောင်းပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ် ပြောရင်းနဲ့ဒီဆုတောင်းပေးချက်တွေဟာ ကျမကို အင်မတန် အထောက်အကူပေးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်..
facebook.com/dvb.entertainment မှ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
DVB - 16.06.2011 - Documentary
ပြည်တော်ပြန်လာတဲ့ မင်းသမီးလေး စ၀်အုန်းညွန့်
ပြသထားတဲ့ စပ်အုန်းညွန့် ပန်းချီ
Sir Gerald Kellyရဲ့လက်ရာ မင်းသမီး
အတွဲ ၂၇ ၊ အမှတ် ၅၂၂ ( ၁၇-၂၃ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၁)
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တော်ဝင်မင်းသား ၀ီလျံနဲ့သူ့မင်းသမီးလေးကိတ်တို့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့ နေ့မှာပဲ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ ၇၉ နှစ်လောက် ပြည်ပ မှာရှိနေခဲ့ရတဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါးဟာ လန်ဒန်ကနေ
တပ်မတော်လေယာဉ်တစ်စင်း လမ်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ယာယီ ကွင်းပိတ်ထားရ
ဇွန်လ ၁၇ ရက် ညနေ ၄ နာရီ အချိန်ခန့်က တပ်မတော်လေယာဉ် တစ်စင်းလမ်းချော်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အား ယာယီ ကွင်းပိတ်ခဲ့ရကြောင်း
ခောတ်ပျက် သူဌေးကြီးများ (ဓါတ်ပုံ)
ဓာတ်ပုံ - ဘီဘီစီ
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကြောင့် လူတစ်သောင်းခန့် ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဟု အီတာလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီကြေညာ
( ၁၇-၂၃ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၁)
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ရမည့်လူဦးရေမှာ ၁၀,၀၀၀ ခန့်ရှိမည်ဟု အဆိုပါစီမံကိန်းကို လုပ်ဆောင် နေသော ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် အီတာလျံထိုင်းကုမ္ပဏီက ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဆို ပါ စီမံကိန်းကြောင့်